गोल छोड्ने उत्तर कोरियाली गोलकिपरलाई के सजाय होला? — Ujyaalo Lalteen
गृहपृष्ठ » खेलकुद → गोल छोड्ने उत्तर कोरियाली गोलकिपरलाई के सजाय होला?
गोल छोड्ने उत्तर कोरियाली गोलकिपरलाई के सजाय होला?
September 26, 2016५२३ पटक
सिओल, असोज १० (एजेन्सी)–रियो ओलम्पिकमा पदक नजित्ने खेलाडीलाई कोइलाखानीमा काम गर्न पठाउने उत्तर कोरियाली शाषकले आफ्नै गल्तीका कारण गोल खाने गोलकिपरलाई के सजाय देलान? यो सुनेर मात्र पनि धेरैलाई आशंका भइसकेको हुनुपर्छ, पक्कै पनि ती गोलकिपरले घर फर्किएपछि कडा सजायको भागीदार हुनुपर्नेछ।
भारतमा हाल जारी युथ–१६ एएफपी कप फुटबल प्रतियोगितामा उत्तर कोरियाका गोलकिपर जाङ पेक होले आफ्नै गल्तीका कारण गोल खान पुगे। जसले गर्दा समूह ‘डी’ अन्तर्गत उज्वेकिस्तानविरूद्धको खेलमा उत्तर कोरिया पराजित बन्न पुग्यो।
यो प्रतियोगितामा १६ टिम सहभागी थिए। समूह चरणको खेलअन्तर्गत ४९ मिनेटमा उज्वेक गोलकिपर जासुर्बेक उमरजाकोभले आफ्नो गोल पोस्टबाट हानेको प्रहार उत्तर कोरियाली गोलकिपरले डिबक्स बाहिर निस्किएर रोक्न नसक्दा बलले गोलको दिसा लिएको थियो। कोरियाली गोलकिपर जाङले राम्रोसँग ‘जज’ गर्न नसक्दा बल उनको टाउको माथिबाट बाउन्स हुँदै गोल पोस्टतर्फ लाग्यो। उनले दौडिएर बल रोक्ने प्रयास गर्दा पनि भूइँमा लडेका थिए।
जाङको हर्कत देखेर रंगशालामा बसेका दर्शकमा हाँसोको फोहोरा छुटेको थियो। यो खेल उज्वेकले ३–१ ले जित्यो। नतिजापछि सोमबारदेखि हुने क्वाटरफाइनलमा उज्वेकिस्तानले इरानसँग खेल्नु पर्नेछ भने दुई पल्टको च्याम्पियन उत्तर कोरियाले ओमानसँग खेल्नेछ।
जाङले नतिजालाई प्रभावित पार्न यस्तो हर्कत गरेको भन्ने धेरैको सोचाई छ। किनभने एसियाली फुटबलमा इरान बलियो टोली मानिन्छ। त्यसैले इरानसँगको सम्भावित भिडन्त टार्न उनले यस्तो गरेको हुन सक्ने अड्कल काटिएको छ। तर, यदि यो अड्कल सत्य सावित नभएको खण्डमा जाङले उत्तर कोरियाली शाषकबाट कस्तो सजाय पाउलान? यो भने सुन्न बाँकी छ।
किनभने २ वर्षअघि ब्राजिलमा सम्पन्न विश्व कपमा उत्तर कोरियाको खराब प्रदर्शनपछि त्यहाँका शाषक किम जङ–उलले सबै खेलाडीलाई कोइलाखानीमा काम गर्न पठाएका थिए।